Puntland oo sheegtay inay qabteen dad waday falal Amnidarro - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Puntland oo sheegtay inay qabteen dad waday falal Amnidarro
Puntland oo sheegtay inay qabteen dad waday falal Amnidarro
Taliska Ciidamada Booliska Gobolka Bari ee Puntland ayaa waxaa ay faah faahin guud ka bixiyeen howlgallo ay ciidamadu saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen Xaafadaha kala duwan ee Magalada Boosaaso.
Howlgallada oo ahaa mid ammaanka lagu sugayay ayaa Saraakiisha Ciidamada Booliska ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen dad falal amni darro ka waday Xaafadaha Magalada Booosaaso iyo degaannada ku dhow dhow.
Taliyaha qeybta Booliiska gobolka Bari G/sare Xuseen Cali maxamud oo la hadlay mid ka mid ah Warbaahinta ka howlgasha deegaannada Puntland ayaa sheegay in holwgalladii ugu damnbeeyay ay Ciidamadu kusoo qabteen tiro dhalinyaro ah,kuwaas oo xilliyada habeenkii dadka Mobeelada ka dhacayay.
Waxaa uu sheegay in sidoo kale in howlgallada ay yihiin kuow eli si caadi ah u socday,waxana uu sheegay in deegaano ka baxsan Magalada Boosaaso oo dad lagu tuhmayo ay howlgallo ka fulin doonaan ilaa iyo inta laga xaqiijinayo amniga.
Hadalka taliyaha qeybta Booliiska gobolka Bari G/sare Xuseen Cali maxamud ayaa kusoo aadayaa xilli dadka ku nool Xaafadaha qaar ee Magalada Boosaaso ay ka cabanayeen Kooxo Burcad ah oo habeenkii dhac u geysanaya, iyada oo sidoo kale qaarxyo Miino ay dhowr jeer ka dhaceen Magalada Boosaaso.
Previous articleDhageyso:-Maamulka Jamacadda Hiiraan oo ka horyimid hadalkii Madaxweyne Waare
Next articleWaxa Ka Ogow Ciyaarta Galabta ee Somalia iyo Zimbabwe
Hoos Ka Dhageyso Warka Subax ee Radio Risaala oo uu Akhrinayo Maxamed Abuukar Dabaashe.